एनआरएन नवौं निर्वाचन: कमजोर नेतृत्व अनि लाजमर्दो यि ६ काण्ड | Citizen Post News
काठमाडौं । गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अक्टोबार १५, १६ मा हुने भनिएको निर्वाचन विवाद र काण्डैकाण्डले रोचक मात्र नभई आलोचित बन्न पुगेको छ । निर्वाचनमा देखिएका तथा सार्वजनिक भएका मात्र ६ काण्डबारे यहाँ छोटकरीमा चर्चा गरिएको छ ।
काण्ड नम्बर १ः
जब एनआरएनको निर्वाचनका लागि विश्वभरबाट नेपालमा प्रतिनिधिहरुको आउनेक्रम सुरु भयो । तब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै विवाद लफडा सुरु भएको थियो । एनआरएन अष्ट्रेलियाका प्रतिनिधि रमेश थापालगायतले त्रिअविमा लफडा गर्दा थापालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । उनी ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेपछि उनी छुटे ।
काण्ड नम्बर २ः
पछिल्लो समय एनआरएनमा चरम राजनीतिकरण भएको कुरा कहिँकतै लुकेको छैन् । मातृभूमीलाई योगदान गर्ने तथा विशुद्ध सामाजिक सेवा गर्ने उदेश्यले स्थापना गरिएको उक्त संस्थामा चरम राजनीति भएको भन्दै संस्थापक अध्यक्ष तथा मुख्य संरक्षक डा. उपेन्द्र महतोले नै निर्वाचनलाई बहिष्कार गरे ।
निर्वाचनले विभाजन पैदा गर्ने र निर्वाचनका सट्टा मध्यममार्गी बाटो अपनाउनुपर्ने महतोले बताउँदै आएका थिए । हुन पनि पछिल्लो समय अर्थात नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा संघमा यति धेरै राजनीति भयो कि कुन ब्यक्तिलाई निर्वाचनमा उठाउने भन्दै नेताहरुको घरघरमा सूची तयार पार्ने स्थिति देखियो ।
काण्ड नम्बर ३ः
संघले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । विवादास्पद वर्तमान अध्यक्ष भवन भट्ट समयमा उपस्थित हुन सनेनन् । त्यसपछि एनआरएनको कार्यसमितिले पत्रकार सम्मेलन गर्यो । पत्रकार सम्मेलन सकिएपछि मात्र अध्यक्ष भट्ट आइपुगे । उनले आफू नभई पत्रकार सम्मेलन गरेको भन्दै सवैको झाँको झारे । फेरि उनीसहितको पत्रकार सम्मेलन भयो । जुन निकै हास्यास्पद बन्यो ।
काण्ड नम्बर ४ः
बुधबार निर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको थियो । निर्वाचन समय सूची अनुसार हुन सकेन । निर्वाचन समयमा नभएपछि गुटउपगुटले होहल्ला, विवाद र कुर्सी तोडफोड गर्यो । जुन निकै लागमर्दो देखियो । एनआरएनको भाडभैलो र उक्त हर्कतबारे सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्याममा आगोसरी फैलियो । अहिले एनआरएनको ब्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
काण्ड नम्बर ५ः
बर्तमान एनआरएनको नेतृत्व अर्थात भवन भट्ट यति धेरै विवादमा परे कि उनीमाथि आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लाग्यो । तर पनि उनले उत्तर दिन जरुरत मानेनन् । अर्कोतिर, एनआरएन नेतृत्वको कमजोर ब्यवस्थापनका कारण तोकिएको तिथिमितिमा निर्वाचन नभएको भन्दै चर्को आलोचना भयो । मातृभूमीका लागि अर्वौ रुपैयाँ लगानी भित्र्याउँछु भन्नेले आफ्नै निर्वाचनका लागि मात्र ५० हजार रुपैयाँ पर्ने मेसिनसमेत ब्यवस्थापन गर्न नसकेको देखियो ।
काण्ड नम्बर ६ः
निर्वाचन तोकिएको कार्यतालिका अनुसार हुन सकेन । प्राविधिक कारण देखाइएको निर्वाचन आज अर्थात अहिले विहान १०ः ०० बजेपछि हुँदैछ । निर्वाचन समितिले मतपत्रमार्फत नै मतदान हुने जानकारी गराएको छ । विदेशमा बसेका, पढेलेखेका, अनुभवी त्यति धेरै ब्यक्ति हुँदा पनि निर्वाचनमा चुस्त, दुरुस्त ब्यवस्थापन हुन सकेन । निर्वाचनमा प्रविधिको सही प्रयोग हुन भएन ।
जसको कारण निर्वाचन अहिले मतपत्रमै आएर टुंगियो । त्यति मात्र कहाँ हो र ? नेपालमै बसोबास गरेका पनि निर्वाचनमा प्रतिनिधि र उम्मेदवार बन्ने लालसा देखाए । जसका कारण विवादले उग्ररुप लियो । विदेशमा बसेर नेपाल सरकार र नेपालीलाई अर्ति उपदेश दिने एनआरएन नेताहरुका लागि यि काण्ड यो भन्दा लाजमर्दो के हुन सक्छ र ?